ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ အလုံခြုံစိတ်ချရဆုံး လေကြောင်းလိုင်းများ
21 Aug 2018 . 5:07 PM
ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေက လေယာဉ်စီးပြီး ခရီးသွားလာရမှာကို ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုကြောက်တတ်တဲ့သူတွေကို Aerophobia လို့လည်း လူသိများကြပါတယ်။ အများစုသောလူတွေက လေယာဉ်မစီးခင်မှာ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကိုတွေးကြောက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ကာမူးဝေခြင်းတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်စီးတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းက ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ရင် စိတ်ပူပန်မှုတွေ အနည်းအကျဉ်းလျော့ကျစေပြီး သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ခရီးသွားနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ အလုံခြုံဆုံး လေကြောင်းလိုင်းတွေအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားနေတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေဟာ လိုက်ပါစီးနင်းသူတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ရရှိထားပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေအဖြစ် လက်ခံထားတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းတွေကို သိရှိထားခဲ့ရင် နောက်တစ်ခါခရီးသွားဖြစ်ခဲ့ရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေ လွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လေကြောင်းလိုင်းတွေက ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံးလဲဆိုတော့ ….
(၁) Virgin Australia, Australia
ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ ၁၉၉၉ ခုနစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Australia မှာ ဒုတိယအကြီးဆုံး လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ စတင်ပြေးဆွဲတဲ့အချိန်ကစပြီး တစ်ခါမှ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လေယာဉ်ပျက်ကျတာမျိုး မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ တန်ဖိုးနည်း အလုံခြုံဆုံး လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Emirates, UAE
၃၇ နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ ဒီလေကြောင်းလိုင်းက တစ်ခါမှ လေယာဉ်ပျက်ကျတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ တစ်ပတ်ကို ပျံသန်းမှုပေါင်း ၂,၅၀၀ ကျော်ပျံသန်းမှုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ အကြီးမားဆုံး လေကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Virgin Atlantic Airways, Great Britain
Virgin Atlantic Airways ကိုတော့ ၁၉၈၄ ခုနစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အများစုသော Virgin Atlantic လေကြောင်းလိုင်းတွေဟာ နိုင်ငံတကာ ခရီးဝေး ပျံသန်းမှုတွေ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားဖူးသော်လည်း တစ်ခါမှတော့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွေတော့ မဖြစ်ဖူးပါဘူး။ ၂၀၁၃ ခုနစ်မှာ လန်ဒန်ကနေ နယူးယောက်ကို လိုက်ပါစီးနင်းတဲ့ ပထမအတန်းကခရီးသည်ဟာ ထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူရရှိခဲ့တဲ့ ထူးခြားအခွင့်အရေးကတော့ လေထဲကနေ စီးပွားဖြစ်အနုပညာပြခန်းကို ကြည့်ရှုခွင့် ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) KLM, Netherlands
KLM လေကြောင်းလိုင်းက ၁၉၁၉ ခုနစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာ ရှေးအကျဆုံးလေကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ အွန်းလိုင်းကနေ ထိုင်ခုံဝယ်ယူတဲ့အခါ ကိုယ်ဘေးနားက ထိုင်မယ့်ခရီးသည်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အဆိုပါခရီးသည်ရဲ့ အချက်အလက်နဲ့ Social Network တွေကိုပါ ကြည့်ရှုလို့ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ KLM ရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကတော့ ၁၉၇၇ ခုနစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Easy Jet, Great Britain
Easy Jet ဟာ တန်ဖိုးနည်း လေကြောင်းလိုင်းစာရင်းထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ Easy Jet ကို 1995 ခုနစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ Great Britain မှာ အကြီးမားဆုံးလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ ဒုတိယအကြီးဆုံး တန်ဖိုးနည်း လေကြောင်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်တည်ထောင်ချိန်ကတည်းက တစ်ခါမှလေယာဉ်ပျက်ကျမှု မရှိခဲ့တဲ့ လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၆) Finnair, Finland
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကတည်းက တည်ရှိလာတဲ့ ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ တစ်ခါမှ မတော်တဆမှု မဖြစ်ဖူးတဲ့အတွက် ဘေးအကင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Finland နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေဟာ ၅ သန်းကျော်ပဲရှိသော်လည်း Finnair နဲ့ နှစ်စဉ်လိုက်ပါစီးနင်းတဲ့ခရီးသည်ပေါင်းဟာ ၁၀ သန်းကျော်ရှိ်ပါတယ်။ Finnair ဟာ ၂၀၁၆ ခုနစ် ဇန်နဝါရီလမှာတော့ ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ အချိန်မှန်ဆုံးလေကြောင်းလိုင်းအဖြစ် နာမည်တွင်လာခဲ့ပါတယ်။
(၇) Etihad Airways, UAE
Etihad Airways ကိုတော့ ၂၀၀၃ ခုနစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်တည်ထောင်တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနစ်မှာ ကလေးတွေနဲ့ ခရီးသွားတဲ့ ခရီးသည်တွေအတွက် လေယာဉ်ပေါ်မှာ “Flying Nanny” လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးထိန်းတွေပါဝင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့အုပ်ထိန်းသူတွေ ရုပ်ရှင်ကြည့် တရေးအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ “Flying Nanny” တွေက ကလေးငယ်တွေကို ကြည့််ရှုစောင့်ရှောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ၂၀၀၇ ခုနစ်တုန်းက မတော်တဆမှု တစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ အဲ့မတော်တဆမှုတုန်းကလည်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ သေကြေပျက်စီးခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
(၈) Spirit Airlines, USA
Spirit Airlines ကတော့ တန်ဖိုးနည်းလေကြောင်းလိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ ပထမဦးဆုံး ဘတ်ဂျက်လေကြောင်းလိုင်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်းဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ နေရာများစွာကို ပျံသန်းသလို၊ Caribbean ကျွန်းစုကိုလည်း ပျံသန်းကာ Latin America နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Costa Rica ၊ Mexico နဲ့ Panama တို့ဆီကိုလည်း ပျံသန်းပါတယ်။ သူတို့လေကြောင်းလိုင်းသမိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ မတော်တဆမှု တစ်ခါမှ မဖြစ်ပွားဖူးပါဘူး။
(၉) Lufthansa, Germany
အကြီးမားဆုံး Germany လေကြောင်းလမ်းဖြစ်ပြီး သက်တမ်း ၅၀ ရှိနေတဲ့ ဒီလေကြောင်းလမ်းဟာ ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်းအဖြစ်လည်း နာမည်တွင်ပါတယ်။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ ဘေးကင်းပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ မြင့်မားတဲ့ လုံခြုံစိတ်ချမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက် ဒီစာရင်းထဲမှာပါဝင်တာကတော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာ ၁၉၉၃ ခုနစ်မှာ လေယာဉ်ပျက်ကျမှု တစ်ခါဖြစ်ဖူးပါတယ်။
အခုဖော်ပြတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေဟာ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတချို့ဖြစ်ပြီး တချို့သောဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးကော လေယာဉ်စီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုခံစားရလေ့ရှိပြီး ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေကို ရွေးချယ်လေ့ရှိလဲဆိုတာကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ကမ်ဘာ့ပျေါရှိ အလုံခွုံစိတျခရြဆုံး လကွေောငျးလိုငျးမြား
ကမ်ဘာ့ပျေါရှိ သနျးပေါငျးမြားစှာသောလူတှကေ လယောဉျစီးပွီး ခရီးသှားလာရမှာကို ကွောကျတတျကွပါတယျ။ အဲဒီလိုကွောကျတတျတဲ့သူတှကေို Aerophobia လို့လညျး လူသိမြားကွပါတယျ။ အမြားစုသောလူတှကေ လယောဉျမစီးခငျမှာ လယောဉျပကျြကမြှုကိုတှေးကွောကျပွီး စိုးရိမျပူပနျမှုတှဖွေဈကာမူးဝခွေငျးတှကေို ခံစားရတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ကိုယျစီးတဲ့ လကွေောငျးလိုငျးက ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ လကွေောငျးလိုငျးဖွဈရငျ စိတျပူပနျမှုတှေ အနညျးအကဉျြးလြော့ကစြပွေီး သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ ခရီးသှားနိုငျမှာ အသအေခြာပါပဲ။
ကမ်ဘာ့ပျေါရှိ အလုံခွုံဆုံး လကွေောငျးလိုငျးတှအေဖွဈ နာမညျကြျောကွားနတေဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတှဟော လိုကျပါစီးနငျးသူတှရေဲ့ ယုံကွညျကိုးစားမှုကို ရရှိထားပွီး သကျတောငျ့သကျသာရှိတဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတှအေဖွဈ လကျခံထားတဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလကွေောငျးလိုငျးတှကေို သိရှိထားခဲ့ရငျ နောကျတဈခါခရီးသှားဖွဈခဲ့ရငျ ပိုပွီးအဆငျပွေ လှယျကူခြောမှမေ့ယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဘယျလကွေောငျးလိုငျးတှကေ ယုံကွညျစိတျအခရြဆုံးလဲဆိုတော့ ….
ဒီလကွေောငျးလိုငျးဟာ ၁၉၉၉ ခုနဈမှာ စတငျတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပွီး Australia မှာ ဒုတိယအကွီးဆုံး လကွေောငျးလိုငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီလကွေောငျးလိုငျးဟာ စတငျပွေးဆှဲတဲ့အခြိနျကစပွီး တဈခါမှ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လယောဉျပကျြကတြာမြိုး မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ တနျဖိုးနညျး အလုံခွုံဆုံး လကွေောငျးလိုငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။
၃၇ နှဈ သကျတမျးရှိတဲ့ ဒီလကွေောငျးလိုငျးက တဈခါမှ လယောဉျပကျြကတြာမြိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလကွေောငျးလိုငျးဟာ တဈပတျကို ပြံသနျးမှုပေါငျး ၂,၅၀၀ ကြျောပြံသနျးမှုလုပျကိုငျနတေဲ့ အရှအေ့လယျပိုငျးရှိ အကွီးမားဆုံး လကွေောငျးကုမ်ပဏီတဈခု ဖွဈပါတယျ။
Virgin Atlantic Airways ကိုတော့ ၁၉၈၄ ခုနဈမှာ စတငျတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ အမြားစုသော Virgin Atlantic လကွေောငျးလိုငျးတှဟော နိုငျငံတကာ ခရီးဝေး ပြံသနျးမှုတှေ ပွုလုပျလကျြရှိပါတယျ။ ဒီလကွေောငျးလိုငျးဟာ မတျောတဆထိခိုကျမှုတှေ ဖွဈပှားဖူးသျောလညျး တဈခါမှတော့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လယောဉျပကျြကမြှုတှတေော့ မဖွဈဖူးပါဘူး။ ၂၀၁၃ ခုနဈမှာ လနျဒနျကနေ နယူးယောကျကို လိုကျပါစီးနငျးတဲ့ ပထမအတနျးကခရီးသညျဟာ ထူးခွားတဲ့ အခှငျ့အရေးတဈခုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ သူရရှိခဲ့တဲ့ ထူးခွားအခှငျ့အရေးကတော့ လထေဲကနေ စီးပှားဖွဈအနုပညာပွခနျးကို ကွညျ့ရှုခှငျ့ ရရှိခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။
KLM လကွေောငျးလိုငျးက ၁၉၁၉ ခုနဈမှာ တညျထောငျခဲ့တဲ့ လကွေောငျးလိုငျးဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့ပျေါမှာ ရှေးအကဆြုံးလကွေောငျးကုမ်ပဏီတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဒီလကွေောငျးလိုငျးရဲ့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ ထူးခွားခကျြတဈခုကတော့ အှနျးလိုငျးကနေ ထိုငျခုံဝယျယူတဲ့အခါ ကိုယျဘေးနားက ထိုငျမယျ့ခရီးသညျကို ရှေးခယျြနိုငျပွီး အဆိုပါခရီးသညျရဲ့ အခကျြအလကျနဲ့ Social Network တှကေိုပါ ကွညျ့ရှုလို့ရခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ KLM ရဲ့နောကျဆုံးနဲ့ အဆိုးဆုံးဖွဈပှားခဲ့တဲ့ လယောဉျပကျြကမြှုကတော့ ၁၉၇၇ ခုနဈမှာ ဖွဈပှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Easy Jet ဟာ တနျဖိုးနညျး လကွေောငျးလိုငျးစာရငျးထဲမှာ တဈခုအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ Easy Jet ကို 1995 ခုနဈမှာ စတငျတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပွီး လကျရှိမှာတော့ Great Britain မှာ အကွီးမားဆုံးလကွေောငျးလိုငျးတဈခုအဖွဈ ရပျတညျနပေါတယျ။ ဒီလကွေောငျးလိုငျးဟာ ဒုတိယအကွီးဆုံး တနျဖိုးနညျး လကွေောငျးလမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ စတငျတညျထောငျခြိနျကတညျးက တဈခါမှလယောဉျပကျြကမြှု မရှိခဲ့တဲ့ လကွေောငျးလိုငျး ဖွဈပါတယျ။
လှနျခဲ့သောနှဈပေါငျး ၅၀ ကြျောကတညျးက တညျရှိလာတဲ့ ဒီလကွေောငျးလိုငျးဟာ တဈခါမှ မတျောတဆမှု မဖွဈဖူးတဲ့အတှကျ ဘေးအကငျးဆုံးလကွေောငျးလိုငျးတှထေဲမှာ ပါဝငျလာခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။ Finland နိုငျငံရဲ့ လူဦးရဟော ၅ သနျးကြျောပဲရှိသျောလညျး Finnair နဲ့ နှဈစဉျလိုကျပါစီးနငျးတဲ့ခရီးသညျပေါငျးဟာ ၁၀ သနျးကြျောရှိပါတယျ။ Finnair ဟာ ၂၀၁၆ ခုနဈ ဇနျနဝါရီလမှာတော့ ကမ်ဘာ့ပျေါရှိ အခြိနျမှနျဆုံးလကွေောငျးလိုငျးအဖွဈ နာမညျတှငျလာခဲ့ပါတယျ။
Etihad Airways ကိုတော့ ၂၀၀၃ ခုနဈမှာ စတငျတညျထောငျခဲ့တဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ စတငျတညျထောငျတဲ့ ၂၀၁၃ ခုနဈမှာ ကလေးတှနေဲ့ ခရီးသှားတဲ့ ခရီးသညျတှအေတှကျ လယောဉျပျေါမှာ “Flying Nanny” လို့ချေါတဲ့ ကလေးထိနျးတှပေါဝငျတဲ့ ဝနျဆောငျမှုကို ပေးစှမျးခဲ့တဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ကလေးတှရေဲ့အုပျထိနျးသူတှေ ရုပျရှငျကွညျ့ တရေးအိပျနတေဲ့အခြိနျမှာ “Flying Nanny” တှကေ ကလေးငယျတှကေို ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလကွေောငျးလိုငျးသကျတမျးတဈလြှောကျမှာ ၂၀၀၇ ခုနဈတုနျးက မတျောတဆမှု တဈကွိမျ ဖွဈပှားခဲ့ဖူးပါတယျ။ ကံကောငျးစှာနဲ့ အဲ့မတျောတဆမှုတုနျးကလညျး လူတဈဦးတဈယောကျမှ သကွေပေကျြစီးခဲ့ခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။
Spirit Airlines ကတော့ တနျဖိုးနညျးလကွေောငျးလိုငျးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလကွေောငျးလိုငျးဟာ ကမ်ဘာ့ပျေါရှိ ပထမဦးဆုံး ဘတျဂကျြလကွေောငျးလိုငျးလို့ ဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါလကွေောငျးလိုငျးဟာ အမရေိကနျပွညျထောငျစုရှိ နရောမြားစှာကို ပြံသနျးသလို၊ Caribbean ကြှနျးစုကိုလညျး ပြံသနျးကာ Latin America နိုငျငံတှဖွေဈတဲ့ Costa Rica ၊ Mexico နဲ့ Panama တို့ဆီကိုလညျး ပြံသနျးပါတယျ။ သူတို့လကွေောငျးလိုငျးသမိုငျးမှာ ကွီးမားတဲ့ မတျောတဆမှု တဈခါမှ မဖွဈပှားဖူးပါဘူး။
အကွီးမားဆုံး Germany လကွေောငျးလမျးဖွဈပွီး သကျတမျး ၅၀ ရှိနတေဲ့ ဒီလကွေောငျးလမျးဟာ ဥရောပရဲ့အကောငျးဆုံးလကွေောငျးလိုငျးအဖွဈလညျး နာမညျတှငျပါတယျ။ ဒီလကွေောငျးလိုငျးဟာ ဘေးကငျးပွီးပွညျ့စုံသော ဝနျဆောငျမှုနဲ့ မွငျ့မားတဲ့ လုံခွုံစိတျခမြှုကို ပေးစှမျးနိုငျတဲ့အတှကျ ဒီစာရငျးထဲမှာပါဝငျတာကတော့ မထူးဆနျးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလကွေောငျးလိုငျးဟာ ၁၉၉၃ ခုနဈမှာ လယောဉျပကျြကမြှု တဈခါဖွဈဖူးပါတယျ။
အခုဖျောပွတဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတှဟော ဘေးကငျးလုံခွုံစိတျခမြှုကို ပေးစှမျးနိုငျတဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတခြို့ဖွဈပွီး တခြို့သောဘေးကငျးစိတျခရြတဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။ပရိသတျကွီးကော လယောဉျစီးတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုခံစားရလရှေိ့ပွီး ဘယျလိုအခကျြတှနေဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတှကေို ရှေးခယျြလရှေိ့လဲဆိုတာကို ပွနျလညျမြှဝပေေးခဲ့ပါဦးနျော။